पर्खाइ सकियो! रूसले अर्को हप्ता विश्वको पहिलो कोरोना खोप दर्ता गर्ने | Yopoho Directory
पर्खाइ सकियो! रूसले अर्को हप्ता विश्वको पहिलो कोरोना खोप दर्ता गर्ने
रूसले अर्को हप्ता विश्वको पहिलो एंटीकोभिड खोप दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ। रसियाका उपस्वास्थ्यमन्त्री ओलेग ग्रिडनेभले भने बमोजिम रूसले कोरोनोभाइरस बिरूद्ध अगस्त १२ तारिखमा खोप दर्ता गर्नेछ।
सम्पूर्ण विश्व कोरोना सँग संघर्ष गरिरहेको छ, खोपको लागि पर्खिरहेको छ । अब यो प्रतीक्षा अन्त्य हुने जस्तो देखिन्छ। रूसले अर्को हप्ता विश्वको पहिलो एंटीकोभिड खोप दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ। रसियाका उपस्वास्थ्यमन्त्री ओलेग ग्रिडनेभले भने कि रूसले कोरोनोभाइरस बिरूद्ध यहि अगस्त १२ तारिखमा खोप दर्ता गर्नेछ।
उफा शहरमा क्यान्सर सेन्टर भवनको उद्घाटन गर्न आएका ओलेग ग्रिडनेभले भने कि अहिले यो कोरोना खोप परीक्षणको तेस्रो र अन्तिम चरण चलिरहेको छ। परीक्षण धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले बुझ्नुपर्दछ कि खोपहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ। चिकित्सा पेशेवर र जेष्ठ नागरिकहरुलाई पहिले खोप लगाईनेछ।
उप स्वास्थ्य मन्त्री ओलेग ग्रिडनेभका अनुसार जनताले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने बित्तिकै कोरोना खोपको प्रभावकारिता थाहा पाउन सकिन्छ। कोरोना खोप न्बmबबिथब अनुसन्धान संस्थान र रूसी रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकसित गरेको छ।
कोरोना भ्याक्सिनको मानव परीक्षण १८ जुन देखि शुरू भयो र यसमा ३८ जना स्वयंसेवकहरू सामिल भएका थिए । सबै सहभागीहरूले रोग प्रतिरोध क्षमता विकास गरे। पहिलो समूह १५ जुलाईमा डिस्चार्ज गरियो, दोस्रो समूह २० जुलाईमा डिस्चार्ज भयो। डब्ल्यूएचओ भने रसियाको खोप कार्यक्रमप्रति सतर्क छ, जसको बारेमा रसियाबाट उनीहरूले कुनै आधिकारिक खबर प्राप्त गरेका छैनन्।
रूसी स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोले रसियामा विशाल खोप अभियान अक्टोबरमा सुरु हुने भने पनि उप स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइबाट यो स्पष्ट भयो कि रसियामा खोप अभियान चाँडै सुरु हुन सक्छ। मन्त्रीका अनुसार सबै खर्च राज्यको बजेटबाट आउने छन्।
Previous: स्वादिलो आँपका अनगिन्ती फाइदाहरू
Next: उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरे